WestJet inowedzera pre-kufamba kuHawaii kuyedzwa kuBritish Columbia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » WestJet inowedzera pre-kufamba kuHawaii kuyedzwa kuBritish Columbia
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Canada Breaking News • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
WestJet nhasi yazivisa kuti yakabatana neLifeLabs muBritish Columbia kupa State of Hawaii-yakatenderwa pre-kuenda kuedzwa. Yakaipa COVID-19 bvunzo mukati ma72-maawa kubva kwekuenda ichasunungura muyenzi kubva kuhurumende inodiwa kwemazuva gumi nemana kugara wega.
"WestJet inofara kuita kuti kuongororwa kwekufamba kusati kwaenda kuBritish Columbia kutanga kweHawaii kubhururuka," akadaro Billy Nolen, WestJet Mutevedzeri weMutungamiriri, Chengetedzo uye Hunhu. “COVID-19 kuyedzwa chinhu chakakosha pakuona kufamba kwakachengeteka uye kwakasimba. "Tinofara kushanda neLifeLabs kupa kuyedzwa kwakatenderwa neHurumende yeHawaii kune vashanyi vedu vanobva kuBC."
SeLabhoratori yekurapa yakakura kuCanada, LifeLabs yakanangana nekupa vanhu vekuCanada mhinduro dzeECVID-19 dzinovachengetedza - kungava munharaunda dzavanogara kana kuenda kunze kwenyika, ”akadaro Charles Brown, Mutungamiri uye CEO weLifeLabs. "Tinodada kudyidzana neWestJet kupa vashanyi vavo mukana wekuedzwa uye zvemhando yepamusoro, mhedzisiro yakavimbika."
Avo vanoshuvira kutora bvunzo yekutanga kuenda kubva kuBritish Columbia vanogona kuzviita nekutsvaga kiriniki yeLifeLab yemubatanidzwa yakanyorwa papeji yeWestJet. Mari yemuyedzo i $ 250 pamwe nemutero, inobhadharwa nemuenzi. WestJet uye LifeLabs ichave neruzivo rwakawanda pamusoro pekuwedzera nzvimbo dzekuyedza BC munguva pfupi.
Vashanyi vari kuenda kuHawaii vane basa rekuona kuti vagamuchira bvunzo mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekubhururuka kwavo kuenda kuHawaii kuitira kuti vadzivirirwe voga uye vanodikanwa kuratidza yavo yakaipa mhedzisiro yekuyedza vasati vakwira. Kana zvawanikwa zvisipo usati wakwira gumbo rekupedzisira rerwendo, mufambi anofanirwa kuisa kwake oga kwemazuva gumi nemana kana urefu hwenzvimbo yacho, chero ipfupi.
Vese vashanyi vane chinangwa chekushanyira Hawaii vanofanirwa kunyoresa vasati vafamba: Zvinodiwa zvekupinda muHawaii zvinowanikwa pa https://hawaiicovid19.com/travel/.
Mwedzi wapera, WestJet yakazivisa hurongwa hwayo hwaZvita kusanganisira kaviri-vhiki nevhiki, isingamise basa pakati peVancouver neHonolulu neVancouver neMaui. Ndege ichave ichibhururuka isiri-yekumira Dreamliner sevhisi pakati peCalgary neHonolulu neCalgary neMaui mukubatana neDynaLife.
Nzira maitikiro Kuenda Kusvika zvinobudirira
Vancouver - Maui 3x vhiki nevhiki 10: 30 am 3: 02 pm December 18, 2020
Maui - Vancouver 3x vhiki nevhiki 10: 30 am 6: 08 pm December 19, 2020
Vancouver - Honolulu 3x vhiki nevhiki 1 pm 5: 34 pm December 18, 2020
Honolulu - Vancouver 3x vhiki nevhiki 10 am 5: 45 pm December 19, 2020
Calgary - Maui 2x vhiki nevhiki 10: 30 am 2: 12 pm December 19, 2020
Maui - Calgary 2x vhiki nevhiki 10 am 6: 53 pm December 20, 2020
Calgary - Honolulu 1x vhiki nevhiki 11 am 2: 25 pm December 20, 2020
Honolulu - Calgary 1x vhiki nevhiki 11 am 7: 56 pm December 21, 2020